Archive du 20191010
Politika Maro ireo mpiara-mitolona tamin-dRajoelina voailika
Efa noresahana teto fa hita taratra ho miha manara-dia ny fomban’ireo mpitondra teo alohany ihany ny filoham-pirenena ankehitriny, Andry Rajoelina, amin’ity fomba fanaovana politika
Fitsinjaram-pahefana tena izy Fandrosona ifotony ara-bola no andrasana
Ny lalàna 020-2014 no mamaritra ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika aminny fitantanana ny faritra.
Famotsorana ireo omby ao Antanimeva Manome herinandro ny FIMPIOMBY
Nambaran’ny FIMPIOMBY gasy “FIkambanan’ny MPIompy Omby gasy” niresaka tamin’ny mpanao gazety teto Antananarivo omaly fa ringana tanteraka ireo omby nogiazana farany,
Ny mahafinaritra vao ny mahasoa !
Mbola adihevitra tsy ho vita ao anatin’ny fotoana maharitra ny momba ny tetikasa sy ny laharam-pahamehan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ekipany ankehitriny.
Fikambanana Fifanampiana Malagasy Ankizy sahirana 140 nentina niala sasatra
Ankizy 140 avy amin’ny faritra samihafa no nentin’ny fikambanana Fifanampiana Malagasy, nialà voly sy nitsangatsangana ary nahazo rivo-dranomasina, tany Foulpointe, nandritra ny efatra andro.
Entana ilaina amin’ny loza voajanahary Hohafainganin’ny fadin-tseranana ny famoahana azy
Nametraka ilay tetikasa “Asyrec”, fomba fiasa vaovao amin`ny fanaraha-maso ireo entana tonga eny anivon’ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina ny fadin-tseranana.
Fivarotam-boninkazo eny Anosy Mihazakazaka ny fametrahana tsena andro alina
Manao tohivakana tato ho ato ny fananganana tsena eny amin’ny toerana fijananon’ny fiarakodia eny amin’ny voninkazo Anosy.
AMBOHIMANDROSO RN7 Zazarano vavikely enim-bolana hitan'ny fokonolona
Mbola mitohy ny fikarohan’ny mpitandro filaminana ny nahavanon-doza.